ဝါးခယ်မ : ရန်ကုန် ၊ မော်လမြိုင် ၊ မြိတ် ( ဘိတ် ) ၊ မြောင်းမြ မုန်.ဟင်းခါး ချက်နည်းများ
ရန်ကုန် ၊ မော်လမြိုင် ၊ မြိတ် ( ဘိတ် ) ၊ မြောင်းမြ မုန်.ဟင်းခါး ချက်နည်းများ
လူကြိုက်များတဲ့မုန့်ဟင်းခါးချက်နည်း ၄ မျိုး
၂။ ငါးခူ – ၄၀ ကျပ်သား (ငံပြာရည်၊ ဆနွင်းမှုန့်၊ စပါးလင် ရေနည်းနည်းဖြင့် ပြုတ်ပြီ အသားထွင်ထားပေးပါ)
၃။ ဌက်ပျောအူ – ၁အူ (အရင့်များဖယ်ပြီ အနုများကို ပါးပါးလှီးပြီလျှင် ဆနွင်း(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)ထည့်ကာ ရေရော စိမ်ထားပေးပါ)
မှတ်ချက် ။ ။ ဆနွင်းစိမ်ခြင်းမှာ ဌက်ပျောအူများ မမဲသွားရန်ဖြစ်သည်။
၄။ ဆန်လှော်မှုန့် – ၁၀၀ ဂရမ် (ရေဖြင့် ဖျော်ထားပေးပါ)
၅။ ကုလားပဲ – ၁၀ကျပ်သား (နူးအိအောင် ရေဖြင့်ပြုတ်ထားပြီ blenderဖြင့် ကြိတ်ထားပေးပါ)
မှတ်ချက် ။ ။ ကုလားပဲပြုတ်ရည် အချိုရည်များကို မုန့်ဟင်းခါးချက်ထဲ ထည့်ရန် သိမ်းထားပါ။
၆။ နံနံပင်၊ ပဲသီး၊ ပူစီနံ – ၁စည်း (ပါးပါးလှီးထားပါ)
၈။ ဘဲဥ – ၁၀လုံး (ကျက်အောင် ပြုတ်ထားပေးပါ)
၁။ ကြက်သွန်နီ – ၂၀ကျပ်သား (ထောင်းထားပါ)
၁။ ငါးခူကို ငံပြာရည်(လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး တ၀က်)၊ ဆနွင်းမှုန့်(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ)၊ စပါးလင်(၁ပင်)ကို ချည်ပြီ ပြုတ်ပေးထားပါ။ငါးပိကြိုက်ကငါးပိစိမ်းစားအနည်းငယ်ထည့်နိုင်၏။
၂။ ပြီးလျှင် ပြုတ်ပြီသား ငါးခူးကို အသားနွင်းပေးပါ။
၃။ ရလာသော ငါးခူးအရိုးများကို စပါးလင်(ပါးပါးလှီးထားသော စပါးလင်များဖြင့် ရောပြုတ်ပေးပါ။ ပြီမှ အရိုးပြုတ်ရေများကို စစ်ယူထားပြီ ဖယ်ထားပေးပါ။
၁။ ဒယ်အိုးထဲသို့ ဆီထည့်ပြီ ဆီပူလာလျှင် ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊နီ၊ စပါးလင်၊ ဂျင်းတို့ကို အရင် ဆီသတ်ပေးပါ။
၄။ အရသာအပေါ့အငံ့အတွက် ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ကြက်သားမှုန့် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း) ထည့်ပေးပါ
၅။ ငါးဆီသတ်ပြီလျှင် မုန့်ဟင်းခါးချက်ရန် ဒယ်အိုးကြီး တစ်ခုထဲသို့ (ငါးဆီသတ်၊ ပဲပြုတ်ရည်၊ ငါးအရိုးပြုတ်ရည်များ၊ ရေ(၂လီတာ)၊ စပါးလင်(၂ပင် ချည်ပြီသား))တို့ကို ထည့်ကာ ရောမွှေလိုက်ပါ။
၆။ ပြီလျှင် ရေဖြင့်ဖျော်ထားသော ဆန်လှော်မှုန့်၊ blender နဲ့ကြိတ်ထားသော ပဲများကို ထည့်ပြီ ရောမွှေပေးပါ။
ရ။ ထို့နောက် ဆူအောင် တည်ထားပြီမှ အပေါ့အငံ့အတွက် ကြက်သားမှုန့်၊ ငံပြာရည်(၁ခွက်)၊ ဆား(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ သကြား(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း)တို့ကို ထည့်ပေးပါ။
၈။ ဆန်လှော်မှုန့် ပွလာမှ ဌက်ပျောအူများ ထည့်ပေးပါ။
၉။ ဌက်ပျောအူနူးပြီဆိုလျှင် ပြုတ်ထားသော ဘဲဥများ နှင့် ငရုတ်ကောင်းမှုန့်(စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်) ဖြူးပေးပါ။
၁၀။ ကျက်ခါနီးမှ ကြက်သွန်နီများကို အလုံးလိုက် ထည့်လိုက်ပါ။
၁၁။ ကြက်သွန်နီများ နူသွားလျှင် မီးပိတ်ထားပြီ ပန်းကန်တစ်ခုထဲ မုန့်ဟင်းခါးဖတ် ၁၀ကျပ်သား၊ နံနံပင်၊ ပဲကြော်များဖြင့် ပြင်ဆင်ထားပါ။
၁၂။ မုန့်ဟင်းခါးရည်များထည့်ပြီ အိုးဘဲဥ ရန်ကုန်မုန့်ဟင်းခါးကို အရသာရှိစွာ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…..
၁။ မုန့်ဟင်းခါးဖတ် – ၄၀ကျပ်သား
၂။ ငါးခူ – ၃၀ ကျပ်သား (ငါးခူကို ထန်းညက် ၃ခဲ၊ ငါးငံပြာရည်၊ ဆား၊ စပါးလင်တို့ဖြင့် ပြုတ်ရမည်)
၃။ ဌက်ပျောအူ – ၁ပင် (အရင့်များဖယ်ပြီ အနုများကို ပါးပါးလှီးပြီလျှင် ဆနွင်း(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)ထည့်ကာ ရေရော စိမ်ထားပေးပါ)
၅။ ကြက်သွန်နီ – ၂၀လုံး (အခွံခွာထားပေးပါ)
၆။ နံနံပင်၊ ပူစီနံ – ၁စည်း (ပါးပါးလှီးထားပါ)
ရ။ ပဲကြော် – ၁၀ခု
၈။ ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက် – ၁ခွက် (ကြက်သွန်ဖြူ ၆မွှာကို ထောင်းပြီ ဆီသပ်ပေးပါ)
၂။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၁၀ကျပ်သား (ထောင်းထားပါ)
၄။ စပါးလင် – ၁ပင် (နှုတ်နှုတ်စဉ်းထားပါ)
၅။ ဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၅ဇွန်း
၆။ ဆနွင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
ရ။ ငရုတ်သီး(အရောင်တင်)မှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
၁။ ဒယ်အိုးထဲ စပါးလင်(၂ပင်)ကို ထုချည်ပြီ ခင်းပေးပါ။ ပြီမှ ငါးခူ၊ ထန်းညက် အညှိ(၃ခဲ)၊ ငံပြာရည်(လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး တ၀က်)၊ ဆနွင်းမှုန့်(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ)၊ ရေ(ငါးမြုပ်ရုံ) ထည့်ကာ ငါးကျက်သည်အထိ ပြုတ်ပေးထားပါ။ငါးပိကြိုက်ကစိမ်းစားငါးပိအနည်းငယ်ထည့်ပါ။
မှတ်ချက် ။ ။ ငါးပြုတ်ရည်ကို သိမ်းထားပေးပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ပြုတ်ပြီသား ငါးခူကို အသားနွင်းပေးပါ။
၃။ ရလာသော ငါးခူအရိုးများကို စပါးလင်(ပါးပါးလှီးထားသော စပါးလင်များဖြင့် ရောထောင်းပေးပါ။ ပြီမှ ရေဖြင့်ကျင်ကာ အရိုးပြုတ်ရေများကို စစ်ယူထားပြီ ဖယ်ထားပေးပါ။
၂။ နောက်မှ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ ဆနွင်းမှုန့်တို့ကို ထည့်ရောမွှေလိုက်ပါ။
၃။ ပြီနောက် ငါးအသားများထည့်၊ ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်) ထည့်မွှေလိုက်ပါ
၄။ ငါးဆီသတ်ပြီလျှင် မုန့်ဟင်းခါးချက်ရန် ဒယ်အိုးကြီး တစ်ခုထဲသို့ (အကွင်းလှီးထားသော ဌက်ပျောအူများ၊ ငါးဆီသတ်နှင့် ငါးပြုတ်ရည်၊ ငါးအရိုးထောင်းရည်များ၊ စပါးလင်(၂ပင် ချည်ပြီသား))တို့ကို ထည့်ကာ ရောမွှေလိုက်ပါ။
၅။ ဌက်ပျောအူထဲ အချိုအရသာများ စိမ့်ဝင်သွားရန် အနည်းငယ် တည်ထားပေးပါ။
၆။ ဌက်ပျောအူ နွမ်းသွားပါမှ ရေနွေး(၃လီတာ)ကို ထည့်ပါ။
ရ။ ပြီလျှင် ရေဖြင့်ဖျော်ထားသော ဆန်လှော်မှုန့် ထည့်ပြီ ရောမွှေပေးပါ။
၈။ ပြန်ဆူအောင် တည်ထားပြီမှ အပေါ့အငံ့အတွက် ကြက်သားမှုန့်(စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း)၊ ငံပြာရည်(၁ခွက်)၊ ဆား(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း)တို့ကို ထည့်ပေးပါ။
၉။ ဆန်လှော်မှုန့် ပွလာမှ ချခါနီးမှ ကြက်သွန်နီများကို အလုံးလိုက် ထည့်လိုက်ပါ။
၁၀။ ကြက်သွန်နီများ နူသွားပြီ အရသာအနေတော်လျှင် ရပါပြီ။
၁၁။ ပန်းကန်ထဲ မုန့်ဟင်းခါးဖတ်၊ နံနံပင်၊ ပူစီနံ၊ ပဲကပ်ကြော်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက် ထည့်၍ အပေါ်မှ ငါးဟင်းရည် လောင်းထည့်ကာ အရသာရှိစွာ တည့်ခင်းသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…..
၁။ ငါးကြင်းကို ငံပြာရည်(လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး တ၀က်)၊ ဆနွင်းမှုန့်(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ)၊ စပါးလင်(၁ပင်)ကို ချည်ပြီ ပြုတ်ပေးထားပါ။ငါးပိကြိုက်သူများငါးပိအနည်းငယ်ထည့်နိုင်၏။
၄။ ငါးဆီသတ်ပြီလျှင် မုန့်ဟင်းခါးချက်ရန် ဒယ်အိုးကြီး တစ်ခုထဲသို့ (အကွင်းလှီးထားသော ဌက်ပျောအူများ၊ ငါးဆီသပ်၊ ငါးပြုတ်ရည်၊ ငါးအရိုးထောင်းရည်များ၊ စပါးလင်(၂ပင် ချည်ပြီသား))တို့ကို ထည့်ကာ ရောမွှေလိုက်ပါ။
၆။ ဌက်ပျောအူ နွမ်းသွားပါမှ ရေနွေး(ရလီတာ)ကို ထည့်ပါ။
၉။ ကြက်သွန်နီများ နူးသွားလျှင် မုန့်ဟင်းခါးဖတ်၊ နံနံပင်၊ ပဲသီး၊ ပူစီနံ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ အကြော်များ ထည့်၍ တည့်ခင်းသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…..
Credit-Wutyee Food house
မြောင်းမြ မုန်ဟင်းခါးချက်နည်းတွင် လျှို့ဝှက်ချက် ရှိနေတယ။်Nan Nan Granaryချက်နည်းပါရှင်။ အများအားဖြင့် သိသူနည်းနေပါတယ်။ နာမည်ကြီးတဲ့ဆိုင်ကချက်နည်းနော်။
ငါးရံ့ ငါးခူ ငါးကြင်းဖြူ များနှင့်ချက်လျှင်ပ်ိုကောင်းပါတယ်။
ငါးပြုတ်ရန်ရေနွေးတည်ထားပါ စပါးလင်. ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူ နှင့်ဆူပွက်လာရင် ငါး ...ငံပြာရည် ထည့်ကာ ဆီနည်းနည်း နနွင်းမု့န့် အနည်းငယ်ဖြင့် ငါးများနူးလာသည်အထိပြုတ်ပေးပါ။
ဟင်းရည်ချက်ရန် ငါးအသားနွှာပါကြေမသွားစေရ ငါးအသားမြှောင်းလေးလှလှလေးဖြစ်နေပါစေ။
ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူ ထောင်းကာဆီသတ် ပြီးလျှင် ငါးပြုတ်ရေအိုးထဲသိ်ု့ထည့်ကာဆူပွက်သည့်အချိန်တွင် နွှာထားသောငါးပြုတ်ထည့်ပါ ..ငါးပြုတ်ဆီမသတ်ရ
ဟင်းရည် ဆူပွက်၍ အနံ့မွှေးလာရင် ဆန်လှော်မှုန့် ပဲမှုန့်အကြက်ရေဖျော်ပြီဖြေးဖြေးလောင်းထည့်ပါ။ ဟင်းရည်ဆူချိန်ရောက်မှ့အပေါ့အငံတွက်ငံပြာရည်ထည့်ပါ။
ဆူပွက်ချိန်မရောက်ခင်ထည့်ရင် ငံပြာရည် အနံ့ထွက်တတ်သည်။
ကြက်သွန်နီထည့် ငရုတ်ကောင်း ပြီးလျှင် အနံအရသာဖြင့်ပြည့်စုံသော မုန့်ဟင်းခါးဟင်းရည် ရပါပြ။ီ အကြော်နှစ်သက်သလိုထည့်စားပါ
**** အရသာရှိရှိမုန့်ဟင်းခါးကြိုက်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးများ လွယ်ကူစွာချက်ပြုတ်နိုင်ကြပါစေ****
မူရင်းတင်ဆက်သူ အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် ။ ပုံများမှာ နီးစပ်ရာသာ တွဲဆက် ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်
Posted by အဇ္ဇုန at 3:06 PM
Labels: ချက်ကြမယ်ဟေ. ကောင်းကောင်း
ရုတ်တရက် နှလုံး ရောဂါဖောက်လာရင် တစ်မိနစ်အတွင်း အသက...
ရန်ကုန် ၊ မော်လမြိုင် ၊ မြိတ် ( ဘိတ် ) ၊ မြောင်းမြ...